Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 16:10
5 458 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 14:10 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 16:10 (hanova) (esory)
Ny [[Alahamady]] no volana sy vintana voalohany amin'ny fanandroana. [[Renivintana]] ny Alahamady. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe االحمل / ''Al-Hamal'' ("ondrilahy") ny teny hoe ''Alahamady''. Ny zoro avaratra-atsinana amin'ny trano no toerana omena azy. Io zoro io dia atao hoe zorofirarazana koa. Mibaby ny Alohotsy sy mitrotro ny Adaoro ny Alahamady fa mifandratra amin'ny Adimizana nefa ny mitanila eo amin'ny Asombola sy Alakarabo izay iandrianany sy iarenany ny izy. Amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Alahamady, dia vava Alahamady sy ny vonto Alahamady ary ny vody Alahamady.
Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Alahamady, dia vava Alahamady sy ny vonto Alahamady ary ny vody Alahamady. Ny vava Alahamady ao amin'ny volana Alahamady dia atao hoe [[Alahamadibe]]. Inoana ho vintan'[[andriana]] sady vintana maha mpanjaka ny Alahamady. Ny Alahamady no vintana mahery indrindra<ref name=":0"><small>Jobily Rakotoson, "L'art divinatoire, parole d'un sage" in ''Madagascar fenêtres'', 2002, p.95.</small></ref>.
Inoana ho vintan'[[andriana]] sady vintana maha mpanjaka ny Alahamady. Ny Alahamady no vintana mahery indrindra<ref name=":0"><small>Jobily Rakotoson, "L'art divinatoire, parole d'un sage" in ''Madagascar fenêtres'', 2002, p.95.</small></ref>.
==== Vava Alahamady ====
Ny vava Alahamady ao amin'ny volana Alahamady dia atao hoe [[Alahamadibe]]. Ralambo sy Andriamasinavalona ary Andrianampoinimerina ihany anefa no mpanjaka teraka tamin' ny vava-Alahamady. Io no natokana hanaovana ny Fandroan'Andriana. Andro mahery ny vava Alahamady ka ny zaza teraka amin'io dia alam-bintana fandrao misavika ny andriana, ka raha ankohonan'ny Andriana dia tsy avela hiara-mitoetra aminy.
==== Vonto Alahamady ====
Ny olona teraka vonto Alahamady dia ampitehirizina amponga telon-jehy sy ampiiompina gisa fotsy mivady mba ho tratra antitra.
==== Vody Alahamady ====
Ny [[Adaoro]] no vintana sy volana faharoa. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اثور / ''Ath-Thur'' na ''Ath-Thaur'' ("ombilahy") ny hoe ''Adaoro''. [[Zanabintana]] ny Alohotsy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano atsinanana no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Alakarabo sady mihataka sy miarina eo amin'ny Adimizana ny Adaoro. Trotroin'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Adaoro. Mitondra tonon'andro roa ny Adaoro, dia ny vava Adaoro sy ny vody Adaoro. Inoana ho andron'afo na andro mandoro ny Adaoro.
==== Vody Adaoro ====
Mitondra tonon'andro roa ny Adaoro, dia ny vava Adaoro sy ny vody Adaoro. Inoana ho andron'afo na andro mandoro ny Adaoro.
Vintana sy volana fahatelo ny [[Adizaoza]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اجوزاء / ''Al-Djuza'' ("kambana") ny hoe ''Adizaoza''. Zanabintana ny Adizaoza. Ny toerana omena azy dia ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano antsinanana. Eo amin' ny Adizaoza no fitoeran'ny sinibe ao an-trano. Ny [[Alakaosy]] no mifandratra amin' ny Adizaoza sady miarina eo amin'ny [[Adijady]]. Baben'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Adizaoza. Mitondra tonon'andro roa ny Adizaoza, dia ny vava Adizaoza sy ny vody Adizaoza.
Mitondra tonon'andro roa ny Adizaoza, dia ny vava Adizaoza sy ny vody Adizaoza. Vintana mahery ny Adizaoza ka ny olona ateraka aminy dia "miozanozana" raha tsy alam-bintana. Izay olona mikasa hampaka-bady, na hanorin-trano, sns., nefa sendra mifandratra amin'ny vintany ireo andro tsara fanaovana izany, dia ny Adizaoza no tokony hofidiny, fa io tsy mihetsiketsika tahaka ny sinibe, ka hampateza ny zavatra kasaina hatao.
==== Vava Adizaoza ====
==== Vosy Adizaoza ====
Vintana sy volana fahefatra ny [[Asorotany]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe <big><small>ا</small></big><small>سرطان</small> / ''As-Saratan'' na ''As-Sartan'' ("foza") ny hoe ''Asorotany.'' [[Renivintana]] ny Asorotany. Ny zoron-trano atsimo-atsinana no toerana omena azy. Mibaby ny [[Adizaoza]] sy mitrotro ny [[Alahasaty]] ny Asorotany. Mifandratra amin'ny [[Adijady]] nefa mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alakaosy]] sy [[Adalo]] izy. Mitondra tonon'andro telo ny Asorotany, dia vava Asorotany sy ny vonto Asorotany ary ny vody Asorotany. Andro mahery ny Asorotany.
Mitondra tonon'andro telo ny Asorotany, dia vava Asorotany sy ny vonto Asorotany ary ny vody Asorotany. Andro mahery ny Asorotany.
==== Vonto Asorotany ====
==== Vody Asorotany. ====
Ny [[Alahasaty]] no vintana sy volana malagasy fahadimy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اأسد / ''Al-Asad'' ("liona") ny hoe ''Alahasaty.'' Zanabintana ny Alahasaty. Ny tapany atsinanana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adalo sy miarina eo amin' ny Adijady ny vintana Alahasaty. Trotroin'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Alahasaty. Mitondra tonon'andro roa ny Adizaoza, dia ny vava Adizaoza sy ny vody Adizaoza.
Mitondra tonon'andro roa ny Adizaoza, dia ny vava Adizaoza sy ny vody Adizaoza. Lazaina ho vinta-mpamosavy sy andron'ody ny Alahasaty.
==== Vava Alahasaty ====
Ny olona teraka vava Alahasaty dia mety ho mpamosavy na ho mpitana ody mahery raha teraka misasaka alina. Tononandro tsara anadratana ody sy sampy ny vava Alahasaty ka tsy tsara anaovana zavatra hafa.
==== Vody Alahasaty ====
Vintana sy volana fahenina ny [[Asombola]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe السنبلة / ''As-Sumbul'' ("virjina") ny hoe ''Asombola.'' [[Zanabintana]] ny Asombola. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alohotsy]] sy miarina eo amin' ny [[Alahamady]] ny vintana Asombola. Baben'ny renivintana Adimizana ny zanabintana Asombola. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Asombola, dia ny vava Asombola sy sy ny vody Asombola.
==== Vava Asombola ====
==== Vody Asombola ====
Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Asombola, dia ny vava Asombolasy sy ny vody Asombola. Vintam-bola sy vintan'ny olona tia harena ny Asombola.
Ny [[Adimizana]] no vintana sy volana fahafito. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اميزان / ''Al-Mizan'' ("mizana") ny hoe ''Adimizana.'' [[Renivintana]] ny Adimizana. Ny zoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena azy. Ny Adimizana dia mifandratra amin'ny Alahamady sady mitanila sy miarina eo amin'ny Alohotsy sy ny Adaoro. Mitrotro ny [[Alakarabo]] sy mibaby ny [[Asombola]] ny Adimizana. Mifandratra amin'ny [[Alahamady]] sady mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alohotsy]] sy ny [[Adaoro]] ny Adimizana. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adimizana, dia ''vava Adimizana'' sy ny ''vonto Adimizana'' ary ny ''vody Adimizana''.
Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adimizana, dia ''vava Adimizana'' sy ny ''vonto Adimizana'' ary ny ''vody Adimizana''. Vintana mahery ny Adimizana nefa mety ho tsara na hahafaty mbola kely an'izay ateraka aminy. Mitrotro ny Alakarabo sy mibaby ny Asombola ny Adimizana.
==== Vava Adimizana ====
Tononandro tsara ny vonto Alahamady ka ny zaza teraka eo dia ho mpanan-karena sy tsy maty vonoina.
Ny [[Alakarabo]] no vintana sy volana fahavalo. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اعقرب / ''Al-Akrab'' ("maingoka") ny hoe ''Alakarabo.'' Zanabintana ny Alakarabo. Ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Miarina eo amin'ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adaoro ny vintana Alakarabo. Ny renivintana Adimizana no mitrotro azy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakarabo, dia ny vava Alakarabo sy ny vody Asombola.
Mitondra tonon'andro roa ny Alakarabo, dia ny vava Alakarabo sy ny vody Asombola. Vintana tsara ny Alakarabo satria androm-bokatra. Voalaza fa teraka tamin'ny vava Alakarabo ny mpanjaka [[Ranavalona II]].
Tokony misoronana akondro vokatra ny olona amin'ny vava Alakarabo amin'ny maha vintam-bokatra azy. Ny zazavavy teraka vava Alakarabo dia ho maro anaka fa ny zazalahy kosa ho tratra antitra. Voalaza fa teraka tamin'ny vava Alakarabo ny mpanjaka [[Ranavalona II]].
Ny zazavavy teraka vaody Alakarabo dia ho maro anaka ihany koa ary ny zazalahy ho tratra antitra.
Ny [[Alakaosy]] dia vintana sy volana fahasivy ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اقوس / ''Al-Kaus'' ("mpitifitra tsipika") ny hoe ''Alakaosy.'' Zanabintana ny Alakaosy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adizaoza Alakaosy sady miarina sy miandriana eo amin'ny Asorotany ny Alakaosy. Baben'ny renivintana Adijady ny Alakaosy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakaosy, dia ny vava Alakaosy sy ny vody Alakaosy.
Mitondra tonon'andro roa ny Alakaosy, dia ny vava Alakaosy sy ny vody Alakaosy. Atao hoe ''Alakaosibe'' ny vava Alakaosy ao amin'ny volana Alakaosy. Vintana mahery indrindra ny Alakaosy. Raha tsy alam-bintana ny zaza teraka aminy dia ahohoka ho faty fa atahorana hahafaty izay lehibe noho izy.
Atao hoe ''Alakaosibe'' ny vava Alakaosy ao amin'ny volana Alakaosy. Amin'ny vava Alakaosy no andro fanandratana ody sy sampy. Manao sorona ny mpitahiry ody mahery sy sampy. Ny vehivavy mbola tokony hiteraka koa dia tsy mihinan-kanina amin'ny vava Alakaosy mba tsy hiteraka Alakaosy. Ny zaza teraka vava Alakaosy dia hanoto ray aman-dreny, ka ahohoka ho faty na alam-bintana mba ho tratra antitra sy ho lehibe ary ho mpanan-karena.
Vintana sy volana fahafolo ny [[Adijady]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اجدي / ''Al-Djadi'' ("osilahy") ny hoe ''Adijady.'' [[Renivintana]] ny Adijady. Ny zoron-trano avaratra-andrefana no toerana omena azy. Mitrotro ny Adalo sy mibaby ny Alakaosy ny Adijady. Mifandratra amin'ny Asorotany sad mitanila sy miarina eo amin'ny Alahasaty sy ny Adizaoza ny Adijady. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adijady, dia vava Adijady sy ny vonto Adijady ary ny vody Adijady.
Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adijady, dia vava Adijady sy ny vonto Adijady ary ny vody Adijady. Vintana mafy ny Adijady ka tsara anorenana zavatra tiana hateza satria "mijadina mafy".
Vintana sy volana faharaika ambin'ny folo ny [[Adalo]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe ادلو / ''Al-Dalu'' ("mpandraraka rano") ny hoe ''Adalo.'' [[Zanabintana]] ny Adalo. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alahasaty]] sy miarina eo amin'ny [[Asorotany|Asorontany]] ny vintana Adalolo. Trotroin'ny renivintana Adijady ny zanabintana Adalo. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Adalo, dia ny vava Adalo sy ny vody Adalo.
Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Adalo, dia ny vava Adalo sy ny vody Adalo. Vintan-dranomaso sy alahelo ny Adalo.
Vintana sy volana faharoa ambin'ny folo ny [[Alohotsy]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe الحوت / ''Al-Hut'' ("trondro") ny hoe ''Alohotsy.'' Zanabintana ny Alohotsy. Ny tapany antsinana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Asombola]] sy miarina eo amin'ny [[Adimizana]] ny vintana Alohotsy. Baben'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Alohotsy. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Alohotsy, dia ny vava Alohotsy sy ny vody Alohotsy.
Atao hoe volam-padina ny volana Alohotsy noho izy iomanana amin'ny Asaramanitra (ny Alahamadibe). Tandremana mafy mba tsy haràtra amin'ny hety na antsy ny zazamadinika fa tsy ho mety sitrana ka noho izay tsy alana volo na hoho na ampiasana zava-maranitra. Ny olona maty ao amin'ny volana Alohotsy dia alevina mangingina.
==== Vava Alohotsy ====
==== Vody Alohotsy ====
Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Alohotsy, dia ny vava Alohotsy sy ny vody Alohotsy. Vintan'olona tsy mahatombin-toerana ny Alohotsy.
== Ny vintana malagasy sy ny zodiaka ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974802"